NYI LYNN SECK 18+ DEN: National Democratic Force: Member Profile Data
Posted by NLS at 5/17/2010 03:26:00 PM
7 Responses to “National Democratic Force: Member Profile Data”
သားလေး စိတ်ဆိုးနေတယ် ဘယ်သူတွေကူးလဲ ပြန်ပေးလိုက်ကြစမ်း
ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ မြင်းတွေကိုး သားလေးစီးမယ်ဆို မကောင်းပါဘူး
ဦးသိန်းစိန် တို့ကကောင်း လားတွေ သားလေး ညီလင်းဆက် ဦးသိန်းစိန် လာဋ္ဌကီးစီးကွယ့်
တစ်ခု မှားနေတယ်ထင်တယ်ဗျ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် ရဲ့ အစ်ကို မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ ရဲ့ အစ်ကို လို့သိရပါတယ်၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရဲ့ ယောက်ဖပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်လဲ ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ယောက်ဖလို့ ကြားသဗျ...။
ဟုတ်ပါဘူး။ ဒောက်တာသန်းငြိမ်းနဲ့က မယားညီအကိုပါ။ ကျောက်တန်းသား။
ဟုတ် ကျေးဇူး ကျွန်တှော ပြန်ပြင်လိုက်ပာမယ်။
Gen Khin Nyunt and Dr Than Nyein are brother in law. Dr Khin Win Shwe has twin sister ( Daw Win May, elder, accountant director and retired fr Si Pin, (city Hall, last known) and Dr Than Nyein is their eldest brother. My dad used to work and post at Daw Pon Carpet factory and I knew Daw Win May personally.